Kitra – «Orange pro league 2021»: mifanakaiky ny isan’ireo ekipa ao amin’ny kaonferansy atsimo | NewsMada
Kitra – «Orange pro league 2021»: mifanakaiky ny isan’ireo ekipa ao amin’ny kaonferansy atsimo
Hiditra amin’ny fihodinana faharoa na ny lalao miverina ireo ekipa 13 hiady ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Orange pro league”. Hatreto, mbola ady mangotraka ny fifanintsanana.
Hanomboka amin’ny asabotsy 27 febroary ho avy izao ny lalao miverina amin’ny fifaninanam-pirenena, taranja baolina kitra “Orange pro league 2021”. Mbola sarotra ny haminavina izay ekipa efatra hiatrika ny “Poule des As”, satria samy manana herijika hiakarana amin’izany avokoa ny rehetra.
Anisan’ny tena miady ny ao amin’ny kaonferansy atsimo, satria mifanakaiky avokoa ny isan’ireo ekipa fito mifaninana. Elanelana isa 1 ny manasaraka ireo telo voalohany, dia ny AS Adema Analamanga, mitarika vonjimaika amin’ny isa 13 arahin’ny FCA Ilakaka, nahazo isa 12 ary ny Ajesaia Bongolava, isa 11 izay mbola tsy ampy fihaonana iray toy ny CS-DFC Vakinankaratra, manana isa 7. Tsy mbola fantatra ny hanatontosana ny lalaon’ireo ekipa roa ireo, izay hampitsimbadika ny filaharana. Isa 7 daholo ihany koa ny an’ny Uscafoot sy ny Zanakala FC. Mitana ny rambony kosa ho an’ity kaonferansy atsimo ity, ny 3FB Toliara, izay tsy mbola manana isa. Resy hatrany izy ireo tamin’ireo lalao 6 natrehiny.
Mbola misongadina kosa ny Five FC, ho an’ny kaonferansy avaratra. Hany ekipa tsy mbola tojo faharesena hatreto, ary mitarika amin’ny isa 13. Very isa 3 kosa ny Cosfa (Bebaoty), eo amin’ny laharana faharoa. Ny Jet Kintana Itasy manana isa 7 raha 5 avy ny an’ny Elgeco Plus sy ny Fosa Jr Boeny. Any amin’ny laharana farany kosa ny Tia Kitra Atsinanana, nahazo isa 1, izany hoe ady sahala iray ny hany vokatra tsara vitany.
Mifanakaiky toa izany ihany koa ny famonoam-baolina ho an’ireo mpilalao. Mbola mitarika aloha i Pao ao amin’ny FCA Ilakaka nahatafiditra baolina 8. Faharoa i Veve avy amin’ny Five FC nahafaty 7 ary i Thino, mpilalaon’ny Zanakala FC, baolina 6.